The Lenovo Z6 Pro enweta nkwalite kachasị na ihe ọhụụ dị mkpa | Gam akporosis
El Lenovo Z6 Pro, nke ewepụtara naanị ihe dịka otu izu gara aga, na-enweta mmelite ọhụrụ na ụdị 'firmware '11.0.457 .XNUMX'. Enwere ọtụtụ mgbanwe na ọganihu ọhụụ na akwa ZUI omenala ọhụụ na nke ka mma n'oge a.
Ya mere, Lenovo gbakwunyere usoro dimkpa DC a na-atụ anya nke ukwuu iji belata nchapụta nke Z6 Pro. Ngwaọrụ hapụrụ ochie 'PWN - Pulse Width Modulation' teknụzụ iji belata nchapu n'ihi nsonaazụ ya na anya ndị ọrụ.
Mmelite kachasị ọhụrụ na-emekwa ka nlekọta ahụike dị ọhụrụ 'U'. Ọ na-eweta ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ, dịka mgbakwunye nke ntuziaka aka iji gbanye ọnọdụ ọnọdụ abalị dị ka ọ dị mkpa, kaadị ozi iji soro onye ozi ahụ n'oge, yana oghere ọhụụ HDR10 Ultra HD nwere otu ọkpọ.
Enwere mgbanwe ụfọdụ na UI nke wijetị ọchụchọ ụwa, na ugbu a ndị ọrụ nwere ike ị na-enweta ihe ọhụụ na akụkọ kachasị ọhụrụ.
Mgbanwe ndị ọzọ gụnyere mgbakwunye nke akara ngosi batrị, ngosipụta ihuenyo zuru oke, yana sistemụ jụrụ mmiri 'Coldfront' ka mma maka iji ihe eji eme ihe. Na mgbakwunye, ọ na - eme ka nkwụsi ike dị mma yana ahụmịhe onye ọrụ zuru ezu ma na - edozi nsogbu dịka ngwa ọfụma ọfụma, usoro Uhealth na-ezighi ezi na njehie njikwa batrị
Mmelite na-emeziwanye usoro mkpokọta usoro na Lenovo Z6 Pro. Ọ bụ mmelite kachasị maka iji melite arụmọrụ na arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Nke a ga - echekwa anya gị pụọ na DWM na - enwu enyo, yana usoro ọhụụ DC.
ZUI 11.0.457 mmelite na-apụ na China na arọ 270.54 MB na nha. Ndị ọrụ, na nnọkọ dị iche iche, kọọrọ na nke a. O nwere ike were obere oge iru ngalaba nke ọ bụla wee gbasasịa ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Lenovo Z6 Pro na-enweta nnukwu mmelite na ihe ọhụrụ dị mkpa